Barack Obama oo ka hadlay sababta uu xulka Argantina ugu fashilmay ku guuleysiga koobka adduunka – Gool FM
Barack Obama oo ka hadlay sababta uu xulka Argantina ugu fashilmay ku guuleysiga koobka adduunka
(Ameerika) 29 Maajo 2019. Madaxweynihii hore dalka Maraykanka ee Barack Obama ayaa ka hadlay sababta uu xulka Argantina ugu fashilmay ku guuleysiga koobka aduunka iyagoo heysta ciyaartooy tayo sare leh ee aad u wanaagsan.
Barack Obama ayaa tilmaamay in mar walba xulka Argantina ay ka maqan tahay awooda wada shaqeynta, sidaas darteed ay u awoodi waayeen inay ku guuleystaan koobka adduunka.
Obama oo ka qeyb galay shirka Exma 2019 ayaa wuxuu ka hadlay dhibaatada xulka Argantina uu qeybta ka yahay Lionel Messi ka heysata ku guuleysiga koobka adduunka wuxuuna yiri:
“Argentina waxay dhibaatooyin fara badan ka heysataa ku guuleysiga koobka adduunka, sababtoo ah kuma ciyaaraan niyada koox ahaan, inkastoo ay heystaan ciyaartooy cajiib ah sida Lionel Messi”.
“Xitaa kuwa aan u malaynayno in da’adu ka dawa timid waa inay la shaqeeyaan kuwa kale si ay u horumariyaan qaab ciyaareedkooda gaarka ah”.
Si kastaba ha ahaatee, xulka qaranka Argantina ayaa awoodi waayay inuu ku guuleysto koobka adduunka iyagoo heysta xiddiga 5-ta jeer ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or ee Lionel Messi.
Dhinaca kale waxaa xusid mudan in Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama uu shaaca ka qaaday sanadkii 2016-ka, in gabdhihiisu ay jecel yihiin xiddiga reer Argantina ee Lionel Messi, sidoo kale wuxuu xaqiijiyay inay doonayaan inay la kulmaan.
“Waxaan u xiisnay Cristiano Ronaldo, sababtoo ah waa kan ugu fiican aduunka” - Modric
Maxamed Saalax oo muujiyay waxa uu ku riyoonayo kahor kulanka finalka ee Champions League